आमाको निधन र बुवाले नहेरेपछि पत्रीका बेचेरै पढाई खर्च , रहर होइन बाध्यता ! – AB Sansar
December 30, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on आमाको निधन र बुवाले नहेरेपछि पत्रीका बेचेरै पढाई खर्च , रहर होइन बाध्यता !
कुशे–८ पैककी शर्मिला रोकाय त्रिभुवन मावि खलंगामा कक्षा १० मा पढ्छिन्। एसईईको तयारीमा धेरै समय दिनुपर्ने बेला उनी हातमा पत्रिका बोकेर सदरमुकामस्थित विभिन्न व्यक्तिका घर र अफिस पुग्छिन्। पत्रिका पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै उनको बिहानको ३ घण्टा त्यत्तिकै बित्छ। जसले गर्दा अरू विद्यार्थीजस्तै सहज रूपमा उनले पढ्न पाएकी छैनन्।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****